Ronen Shnidman's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Ronen Shnidman
Ronen muvhangeri wechigadzirwa pa pombi, kambani yakazvipira kuita kuti zvive nyore kushandisa zvemagariro uye zvehunyanzvi ruzivo nezve vanhu. Unogona kumutevera uye nhau dzichangoburwa uye maapuro kubva Pipl pane Twitter.
Mugovera, January 25, 2020 China, November 12, 2020 Ronen Shnidman
Email kushambadzira yave iri nzira inozivikanwa kune vashambadziri kuti vasvike vangangoita vatengi kubva pakagamuchirwa kwakapararira kuma1990. Kunyangwe pakagadzirwa matekinoroji matsva senge enhau enhau, kukurudzira, uye kushambadzira zvemukati, email ichiri kutarisirwa senge inoshanda zvakanyanya maererano neongororo yevatengesi 1,800 inoitiswa naSmart Insights uye GetResponse. Nekudaro, izvo hazvireve kuti email kushambadzira yakanakisa maitiro haina kuchinja nehunyanzvi hutsva Kutenda kune vezvenhau pane izvozvi